पानीपुरीमा पिसाब मिसाइरहेको भिडियो भाइरल, भिडियोसहित — Sanchar Kendra
उक्त भिडिओ भाइरल बनेपछि प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। ठेला सञ्चालक ६० वर्षीय अक्रुल सहानीलाई प्रहरी पक्राउ गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। पिसाब मिसाइरहेको भिडियो अमर ज्योती नामक फेसबूकबाट सार्वजनिक गरिएको थियो। हेर्नुहोस भिडियो
पानीपुरी खासमा भारतिय परिकार हो । अर्थात भारतको रैथाने परिकार । पिरो, अमिलो, टर्रो स्वादको यो परिकार सडकदेखि रेष्टुरेन्टको मेनुमा सम्म उपलब्ध हुन थालेको छ । शहरका यस्ता चोक र गल्ली सायदै होलान्, जहाँ पानीपुरीको दोकान छैन । रमाइलो त के भने अक्सर पानीपुरी युवतीहरुको पि्रय खान्की हो । जहाँ पानीपुरीको दोकान थापिन्छ, त्यहाँ युवतीको झुन्ड देखिन्छ ।
यद्यपी यो सबै वर्ग, लिंग र उमेरका उपभोक्ता लोभ्याउने खान्की हो । अर्थात सर्वपि्रय परिकार ।
कसरी सुरु भयो पानीपुरी ?
भारतमा यसलाई पानीपुरी एवं गोलगप्पे दुबै नामबाट चिनिन्छ । गोलागप्पा उर्दू शब्द हो । यसको अर्थ हो गोलो पुरी जस्तै चिजमा आलुको चटपटे मिसाइएको । पानीपुरीको गोलाकार पुरी मुखमा एकै गाँसमा खान सकिन्छ । यही कारण यसलाई गोलगप्पा भनिएको हो । अंग्रेजी शब्दकोशमा गोलगप्पेको अर्थ ‘पानीले भरिएको इन्डियन ब्रेड’ भिनएको छ । यसको शाब्दिक अर्थ हो, पानीको रोटी । सन् १९९५ मा यस परिकारलाई गोलगप्पा नाम दिइएको हो ।
पानीपुरी कसरी बन्छ त ?
पानीपुरी अटा वा सुजी मिलाएर बनाइन्छ । भुक्क फुलेको गोलाकार रोटीमा एकातिर सानो प्वाल बनाइन्छ । त्यसमा आलु लगायत मसलाको मिश्रण राखिन्छ । अब इमली पानी हालेर पानीपुरी खान सकिन्छ ।
हामीकहाँ पानीपुरी खानु स्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो मानिदैन । के त्यसो भए पानीपुरी अस्वस्थ्यकर खानेकुरा हो ?
पक्कै होइन । पानीपुरीलाई स्वस्थ्यकर ढंगले बनाउने र खाने हो भने यसले स्वास्थ्यलाई कुनै हानी गर्दैन । यद्यपी हामी बजारमा उपलब्ध पानीपुरी खान्छौं । त्यसमा पनि सडक किनारमा राखिएको । ति पानीपुरी बनाउने तौर-तरिका स्वस्थ्यकर छैनन् ।
पानीपुरीमा हानिकारक मिसावट
त्यसो त बजारमा उपलब्ध पानीपुरी स्वस्थ्यकर ढंगले बनाइदैन । पुरी बनाउनका लागि प्रयोग गरिने तेल होस् वा आलु सबै अस्वस्थ्यकर हुनेगर्छ । कतिपय अवस्थामा के पनि पाइएको छ भने पानीपुरीमा हानिकारक मोविलजस्तो देखिने पदार्थ समेत प्रयोग गरेका छन् । सरकारी अनुगमनका क्रममा पानीपुरीमा हानिकारक पदार्थ मिश्रण गरिएको पाइएको छ । हेर्दा खानेतेल जस्तो देखिने ति पदार्थ अखद्य तत्व रहेको पनि पुष्टि भएको छ ।
पानीपुरी बेच्न प्रतिबन्ध
कतिपय ठाउँमा पानीपुरी बिक्री वितरणमै रोक लगाएको खबर पनि सुनिने गरिएको छ । मानव स्वास्थ्यमा गंभिर असर गर्ने पदार्थ मिश्रण गरेर बनाइने भएकाले पानीपुरी प्रतिबन्ध लगाएको बताइन्छ ।
बाग्लुङमा यसअघि अखाद्य पदार्थ मिसाएको, जथाभावी ढंगले बेचिएको भन्दै पानीपुरी विक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
हालै प्रकासित एक खबर अनुसार पानीपुरीको सेवनले क्यान्सर जस्तो घातक रोग लाग्नसक्ने बताएको छ । पानीपुरीको अधिक सेवनले कलेजोलाई निकै हानि पुर्‍याउने गर्छ । पानीपुरीमा मिश्रण गरिएको कृतिम रंग र अखाद्य पदार्थ आन्द्राको लागि हानिकारक हुने बताइन्छ ।